कोरोना–पाठ सिक्न नसक्नेहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
‘धन, जन, बल, बैंस आदिको सेखी गर्नु व्यर्थै रहेछ । लिएर जाने त केही पनि होइन रहेछ, सबै बाँचुन्जेलसम्मका लागि मात्रै ।’
जेष्ठ ५, २०७८ साधना प्रतीक्षा
काठमाडौंमा फराकिलो कम्पाउन्ड भएको भव्य घर, दुइटा त गाडी मात्रै ! ड्राइभर, सुरक्षागार्ड तथा सर्भेन्ट क्वार्टर पनि घरैमा । तर बोल्दा पनि पैसा पर्लाजस्तो गर्ने तिनले केही दिनअघि भने मलाई टाढैबाट देखेर बोलाइन् । अलि पर रोकिएको चम्किलो गाडी देखाउँदै आफूकहाँ जाने प्रस्ताव राखिन् । मलाई सपनाझैं लाग्यो । कामविशेषले निस्केकी म उनको आग्रहलाई अस्वीकार गर्न नसकी साथ लागें ।
साँच्चिकै अनौठो लाग्यो, उनले यस पटक ड्राइभरलाई रूखो स्वरमा आदेश दिइनन् र साथकी सुसारेलाई पनि मायालु व्यवहार गरिन् । घर पुगेपछि गेट खोल्न ढिला गरेको भन्दै सुरक्षागार्डलाई झपारिनन् । भित्र पसेपछि अझै अचम्म लाग्यो । सामान्य मानिससँग प्रायः घुलमिल नहुने अनि पाहुना आउँदा पनि आफ्नै स्तर मिल्नेसँग मात्र कुराकानी गर्ने उनका श्रीमान् मलाई देखेर कुर्सीबाट उठे । भान्सेलाई पनि केही खानेकुराका लागि नरम आदेश दिएर दुवै जना मसँग कुराकानी गर्न लागे ।
उनीहरूमा आएको असामान्य परिवर्तन त कोरोना महामारीको पाठ पो रहेछ ! ‘के गर्नु नानी ! धन, जन, बल, बैंस आदिको सेखी गर्नु व्यर्थै रहेछ । नाथे कोरोनाले यी सबैलाई एकैसाथ पछारिदियो नि ! लिएर जाने त केही पनि होइन रहेछ, सबै बाँचुन्जेलसम्मका लागि मात्रै । झन्डै सिद्ध्याएको नि कोरोनाले ! आफ्ना सबै विदेश, आफन्तहरू पनि कहाँ आए र !’ श्रीमान्चाहिँले भान्से र सुसारेतर्फ औंल्याउँदै थपे, ‘धन्न, यी दुइटीले साथ छोडेनन् र पो बाँचियो !’
महामारीको पहिलो लहरमा ‘उच्च वर्गको पार्टी कसरी असुरक्षित होला र’ भनेर भोज खान गएका बेला उनीहरू दुवै संक्रमित भएछन् । उनीहरूको अहंवादी प्रवृत्तिका कारण परिचितहरू असन्तुष्ट थिए नै, झन् कोरोना लाग्यो भनेपछि त कोही फर्केनछन् । ती दुई महिलाले भने आफ्नो धर्म नछाडी सेवा गरेकाले उनीहरू कोरोनालाई परास्त गर्न सफल भएछन् । महिनादिनको आइसोलेसनमा उनीहरूले जीवनजगत्को शाश्वतता बुझेछन् । उनीहरूकै शब्दमा, ‘अमूल्य पाठ’ सिकेछन् र त यस्तो परिवर्तन आएछ ! आश्चर्यमा पर्दै केही समय बिताएर फर्कने बेलामा म झनै चकित भएँ । ‘आउँदै गरे है नानी, हाम्रो पो को छ र ? केही पर्‍यो भने भन्न अप्ठ्यारो नमान्नु नि’ भन्दै, असहायहरूको सेवाका लागि खोलिएको मेरो संस्थालाई केही रकम थमाउँदै मलाई घरसम्म पुर्‍याउन ड्राइभरलाई अह्राए !
यस्तै, अर्का एक परिचितको पनि सम्झना भइरहेको छ जसले पैसालाई नै सर्वोपरि ठान्थे । सहरमा दुइटा घर भाडामा लगाएका उनले भाडावाललाई मान्छे नै गन्दैनथे । वर्षैपिच्छे भाडा बढाएर हैरान पार्नु, महिना मर्न नपाउँदै भाडा चाहियो भन्दै ढोका ढकढकाउनु उनको धर्म नै थियो । हरेक फ्ल्याट तथा कोठाबाहिर बेलाबेला जुत्ता–चप्पल निरीक्षण गर्नु पनि उनको अर्को विशेषता थियो । कसैकहाँ पाहुना आएको उनलाई मन पर्दैनथ्यो । धन भए सब थोक पाइन्छ भन्ने उनको सोचले त्यति बेला हावा खायो जब परिवारका सबै जना एकसाथ कोरोना भाइरसको सिकार भए । त्यत्रो सम्पत्तिका मालिक, सास फेर्ने हावाका लागि छटपटाउनुपर्‍यो ! भाडामा बस्ने एक जनाले अनवरत प्रयास नगरेका भए त उनकी पत्नीको ज्यानै जाने ! महामारीलाई जितेपछि उनीहरूमा पनि नवीन चेतना जागेछ, ‘भौतिक सुखसुविधा केही पनि होइन रहेछ; विपत्तिले ठूलो–सानो, सम्पन्न–विपन्न भनी भेदभाव गर्दो रहेनछ ।’ आँखासामु कैयौं लास देखेका उनले पैसाले मात्र जीवन किन्न नसकिने भन्दै आफ्ना सबै भाडावालालाई छ माहिनाको घरभाडा मिनाहा गरी सो रकमबाट सबैलाई भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिको सामनाका लागि तयारी गर्न आग्रह गरेछन् ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । उनीहरूजस्ता असंख्य मानिसले हालको परिस्थितिबाट पाठ सिकिसके तर केही यस्ता पनि छन्, जसले अनगिन्ती विषमता र कठिनाइ झेलेर पनि कुनै पाठ सिकेनन् र सिक्न पनि चाहन्नन् । उनीहरूसँग सिक्ने र सिकाउने समय नै कहाँ छ र ? उनीहरू त केवल ‘ढलाउने’ र ‘बनाउने’ खेलमै व्यस्त छन् । ‘के काम गर्छेस् बुहारी ? पोख्छु, उकेर्छु’ भनेझैं छ उनीहरूको दैनिकी । बहुमत र अल्पमतको जोडघटाउ गर्दागर्दै उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य, नैतिकता, मर्यादा र इमानदारीसम्म बिर्सिसकेका छन् । लामो समयदेखिको महामारीका कारण सर्वसाधारण त्राहिमाम् भइसक्दा, दैनिक सयौं लासको लस्कर देख्दा पनि उनीहरूलाई कुनै असर परेन र त सत्ताको नाटक बडो कुशलतापूर्वक मञ्चन गर्न सफल बने ।
तिनै कलाकारमध्ये अहिले एक थरी सिंहदरबारको गद्दी पाएकामा गमक्क परिरहेका छन् भने, अर्का थरी सोही कुर्सीबाट हुत्तिनुपरेकामा पुर्पुरो समाउँदै रन्थनिएका छन् र त्यो कुर्सी पुनः कसरी हासिल गर्ने भन्दै जोखाना पनि हेर्दै छन् । तिनै कलाकारलाई हामीले आफ्नो र मुलुकको भविष्यको जिम्मा लाएका थियौंÙ आफ्नो आस्था र विश्वासको अमूल्य मत दिएर पठाएका थियौंÙ आपत्विपत्सँग जुध्दै हाम्रो सुरक्षा गर्ने योद्धा ठानेका थियौं । धिक्कार छ, त्यो आस्था र विश्वासलाई ! अहिले हामी इतिहासकै कठिन मोडमा छौं तर अगुवाहरूले भने हामीलाई फर्केर हेर्नसम्म भ्याएनन् । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, साना दल, ठूला दल, एकीकृत तथा विखण्डित आदि–इत्यादि पहिचान बोकेकाहरू केवल सत्तामै आसीन हुने दाउमा देखिएÙ कोही अग्रसर भएनन् हाम्रो घाउमा मल्हमपट्टी गर्न ।
ओहो, सत्ताको स्वाद कति विघ्न गाढा हुँदो रहेछ ! त्यसैले होला, आम नागरिक महामारीले आक्रान्त भइरहँदा, सास फेर्ने अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका बेला, सरकारी अस्पतालले बेड अभावको लाचारी देखाइरहँदा, स्वास्थ्यकर्मीहरू अनेक जोखिम झेल्दै बिरामीको उपचारमा खटिइरहँदा पनि सत्ताको गणितीय खेलमा लागेका हाम्रा नेताहरूको ध्यान यता पटक्कै गएन । विगतमा विश्वले महामारीको नराम्रो प्रहार खेपिसकेको र विज्ञहरूले पुनः महामारी दोहोरिने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा पनि यिनीहरूले सम्भावित विपत्तिको सामनाका लागि कुनै दिन संवाद गरेनन् । के सत्ता, के प्रतिपक्ष सबै महामारीबाट ध्यान हटाई एकअर्कालाई हिलो छ्यापेरै बसिरहे । उनीहरूले गरे त केवल सत्ताप्राप्तिको लिगलिगे दौड ! आम जनाता एक मुठी सासका लागि याचना गरिरहेछन्, आफ्नो झिटिमिटी सक्दा पनि उपचार नपाएर मरिरहेछन्, नेताहरू भने नयाँ सरकारको समीकरणमा उही जोड, घटाउ, गुणन र भाग गरिरहेछन् ।
मानिसले आफ्नै कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्छ र यसो गर्न नसक्नेहरूको कहिल्यै प्रगति हुँदैन । हाम्रा नेता र सरकारले आसन्न विपत्तिबाट पनि कुनै पाठ नसिक्ने हो भने, अब पनि जनताको जीवनरक्षाका लागि सामदामले कदम चालिएन भने इतिहासले उनीहरूलाई क्षमा गर्नेछैन । रोम जलिरहँदा बाँसुरी बजाउने निरोलाई बिर्सेर भविष्यले देश मृत्युको हलाहलमा छटपटिइरहेका बेला पनि सत्ताको खेलमा तँछाडमछाड गरिरहने नेपालका नेताहरूलाई सम्झिनेछ । उनीहरूले त्यतिको मिहिनेत, त्यति दौडधुप र त्यति विघ्न हारगुहार महामारीका विरुद्ध गरेका भए आज हामी यसरी आक्रान्त हुने थिएनौं अनि अन्तिम संस्कारका लागि आर्यघाट पनि अपुग हुने थिएन होला ।
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७८ ०८:१५